:: My Little World ::: ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကြာဇံသုတ်
Posted by Nay Nay Naing at 9/24/2010 01:48:00 PM
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက ကြာဇံကြော် နဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုး ကောင်းသလို အရင်တုန်းက ကုန်သွယ်ရေးနားမှာ ရောင်းတဲ့ ကြာဇံကြော် နဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုး ဆိုင်လည်း တော်တော် ကောင်းတယ်။ခုတော့ လိုင်စင်
လျှောက်တာတွေ မရှိတော့ ဆိုင်လည်း ဘယ်ပြောင်းသွားတယ် မသိတော့ဘူး။
btw,ခုချိန်က စားထားတာတွေ အစာကြေသွားပြီဆိုတော့ ကြာဇံကြော် နဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးပုံ ကြည့်ပြီး တော်တော် ဗိုက်စာသွားတယ်။ ဂလု .... ဂလု .....
Friday, September 24, 2010 4:22:00 PM
ဒါနဲ့အဖော်ရပြီ။ အခု ဗိုက် အတော်ဆာနေတယ်။ ညစာ ၇ နာရီခွဲမှ ကျွေးမယ် ပြောတယ်။ ညနေ ပုဇွန်သွားမျှားကြရမယ်။ ပုဇွန်မျှားတာတော့ ကိုယ်တိုင်ဆို တစ်ကောင်မှတော့ မိမယ် မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူများဖမ်းမိတာတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် စိတ်ကူးတယ်။
Friday, September 24, 2010 5:33:00 PM
from Inle? if not pls let me know the Restaurent
ပုဇွန်သွားဖမ်းမတဲ့... စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလိုက်တာ... ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ဖို့ စောင့်နေမယ်နော်...း))
ခုတစ်လော ပုစွန်မျှားတာ ခေတ်စားသလားမသိဘူး။ ရုံးကတစ်ဖွဲ့လဲ ဟိုတစ်လောက ပုစွန်သွားမျှားကြသေးတယ်။
Yes. This is from Inlay Res. Nice photo. But,I have been tasted and tried it at this evening.The taste is not really good. :C
Friday, September 24, 2010 10:19:00 PM
Saturday, September 25, 2010 11:52:00 PM